Usunayo (Imeyili) Onayo Imeyili: Kungani Ubuhlakani Bokuzenzela Kusho Ikusasa Eliqinile Lama-imeyili Okumaketha | Martech Zone
Unayo Imeyili (Okwamanje): Kungani Ubuhlakani Bokuzenzela Kusho Ikusasa Eliqinile Lama-imeyili Wokumaketha
Kunzima ukukholelwa ukuthi i-imeyili ibikhona iminyaka engu-45. Iningi labakhangisi namuhla alikaze lihlale emhlabeni ngaphandle kwe-imeyili.
Kodwa-ke naphezu kokulukelwa kokuphila kwansuku zonke kanye nebhizinisi kwabaningi bethu isikhathi eside, ulwazi lomsebenzisi lwe-imeyili luye lwavela kancane selokhu kwathunyelwa umyalezo wokuqala 1971.
Impela, manje sesingafinyelela i-imeyili kumadivayisi amaningi, kakhulu nganoma yisiphi isikhathi noma kuphi, kepha inqubo eyisisekelo ayikashintshi. Umthumeli ushaya ukuthumela ngesikhathi esinqunyelwe, umyalezo uya kubhokisi lokungenayo bese ulinda lowo owamukelayo ukuthi awuvule, ngethemba ngaphambi kokuwususa.
Ngezikhathi ezithile phakathi neminyaka, ochwepheshe babikezela ukunyamalala kwe-imeyili, kufakwe esikhundleni sezinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo ezintsha nezipholile. Kepha njengoMark Twain, imibiko yokufa kwe-imeyili iye yaba nehaba kakhulu. Ihlala ilayini obalulekile futhi osetshenziswa njalo wokuxhumana phakathi kwamabhizinisi namakhasimende - akusewukuphela kwayo, ngokuqinisekile, kepha yingxenye ebucayi yomxube.
Kakhulu Ama-imeyili ebhizinisi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-100 zithunyelwa nsuku zonke, futhi inani lama-akhawunti ebhizinisi le-imeyili kulindeleke ukuthi likhule lifike kuma-4.9 billion ekupheleni kwalo nyaka. I-imeyili ihlala ithandwa kakhulu ku-B2B, njengoba ivumela ukuxhumana okude nokujule uma kuqhathaniswa nemithombo yezokuxhumana nezinye izinhlobo zemiyalezo. Eqinisweni, abathengisi be-B2B bathi ukumakethwa kwe-imeyili kunjalo izikhathi 40 isebenza kangcono kunemithombo yezokuxhumana ekukhiqizeni imikhondo
Akugcini nje ukuthi i-imeyili izosuswa noma kunini, kepha ikusasa libukeka liqhakazile, ngenxa yobuchwepheshe bobuchwepheshe bokufakelwa obulungiselelwe ukuphinda buvuselele ulwazi lwe-imeyili. Ngokuhlaziya amaphethini wokuziphatha kwabamukeli ekuvuleni, ekususeni nasekusebenzeni kuma-imeyili, i-AI ingasiza abathengisi ukuthi bahlele ukufinyelela kwabo ku-imeyili kumakhasimende 'kanye namathemba athile.
Kuze kube manje, ubuchwepheshe obuningi bokumaketha ezungeze i-imeyili bugxile kokuqukethwe. Kukhona yonke imboni ezinikele ekusizeni ukudala umlayezo we-imeyili ofanele kakhulu ukucela impendulo nesenzo. Okunye okusha kugxile ezinhlwini. Uhlu lokuhlwaya. Izinhla ezikhulayo. Faka kuhlu inhlanzeko.
Konke lokho kubalulekile, kepha ukuqonda ukuthi abamukeli bavula nini futhi kungani ama-imeyili kuhlala kuyimfihlakalo - futhi kubalulekile ukuxazulula. Thumela kakhulu, futhi ubeka engozini amakhasimende acasulayo. Ungathumeli uhlobo olwanele lwe-imeyili - ngesikhathi esifanele - futhi uzibeka engcupheni yokulahleka empini egcwala kakhulu yezindawo zokungenisa izindlu.
Ngenkathi abathengisi bethathe umzamo omkhulu wokuzenzela okuqukethwe komuntu siqu, ukunakwa ekwenzeni inqubo yokulethwa ngokwezifiso kube kuncane. Kuze kube manje, abathengisi banesikhathi sokusatshalaliswa kwe-imeyili ngobuningi ngokusebenzisa umuzwa noma ubufakazi obungacacile obuqoqwe emaqenjini amakhulu futhi buhlaziywa ngesandla. Ngaphezu kokumaketha lapho kungenzeka ukuthi kufundwe ama-imeyili, lokhu kuhlaziywa okwenziwe nge-napkin akukhulumi ngempela lapho abantu bathambekele ekuphenduleni futhi bathathe izinyathelo.
Ukuze banqobe, abathengisi bazodingeka ngokwengeziwe ukwenza ngezifiso ukulethwa kwemiyalezo yokukhangisa esekwe kuma-imeyili njengoba nje bakwenze kwaba ngokwakho okuqukethwe kwalowo milayezo. Ngenxa yokuthuthuka kwe-AI nokufunda komshini, lolu hlobo lokuzenzela olwenziwe ngezifiso luba ngokoqobo.
Ubuchwepheshe buyaqhamuka ukusiza abathengisi ukubikezela isikhathi esihle sokuthumela umlayezo. Isibonelo, amasistimu angafunda ukuthi uSean uthambekele kakhulu ekufundeni nasekwenzeni ama-imeyili amasha ngo-5: 45 PM ngenkathi esesitimeleni sabagibeli egodukayo. Ngakolunye uhlangothi uTrey uvame ukufunda i-imeyili yakhe ngaphambi kokulala ngo-11 PM kepha akalokothi athathe isenzo aze ahlala etafuleni lakhe ngakusasa ekuseni.
Amasistimu wokufunda ngomshini angathola amaphethini wokwenza ngcono i-imeyili, awakhumbule futhi enze ngcono amashejuli wokuletha imiyalezo phezulu ebhokisini lokungenayo phakathi kwewindi elifanele lokuzibandakanya.
Njengabamakethi, siyabonga futhi ukuthi amathemba anohlu olukhulayo lweziteshi zokuxhumana ezithandwayo. Umlayezo wombhalo. Amapulatifomu wokuthumela imiyalezo yezokuxhumana. Cindezela izaziso kuhlelo lokusebenza lweselula.
Ngokushesha, amasistimu wokufunda womshini enzelwe ukuthandwa kokulethwa kwe-imeyili angafunda iziteshi ezithandwayo zokuhambisa imiyalezo. Okuqukethwe okulungile, okulethwa ngesikhathi esifanele, ngesiteshi esikhethwe isikhathi esithile.
Konke ukuxhumana onakho namakhasimende kubalulekile. Konke ukuxhumana onakho namakhasimende kuyithuba lokufaka impendulo ekhulisa uhambo lwabo lokuthenga ngezindlela ezintsha nezingafani. Wonke umuntu unamaphethini wokuthenga ahlukile.
Ngokwesiko, abathengisi basebenzise amahora amaningi bezama ukwenza amabalazwe ohambo oluqondile lwamaqembu amakhulu amakhasimende bese bethela usimende ngenqubo. Amasistimu awanandlela yokuzivumelanisa nezinguquko ezingenakugwemeka emaphethini wokuthenga ngamanye futhi awakwazi ukusabela kunoma yiziphi izinguquko zemvelo.
Njengoba i-imeyili kulindeleke ukuthi ihlale iyisixhumanisi esibalulekile phakathi kwezinkampani namakhasimende, iqhaza lika-AI ekufundiseni ubuqili obusha benja eneminyaka engama-45 yintuthuko eyamukelekile. Izinhlelo zokuzenzakalela zokumaketha manje ukucabanga mayelana nawo wonke amakhasimende, konke okuqukethwe, futhi uwafanise ngesikhathi sangempela ukuhlangabezana nezinhloso zebhizinisi. Ukulethwa kwe-imeyili ngobuchule kudinga ukuba yingxenye ebalulekile yalokho.
Tags: I-Act-Onaiukuhlakanipha okungekhona okwangempelab2bukuthenga uhamboimeyili Marketingukuhola isizukulwaneukufunda imishinii-imeyili yokumaketha
UMichelle unjalo I-Act-On SoftwareIsikhulu Esiphezulu Sezokukhangisa, futhi siqondisa imizamo yenkampani yokwakha, yokufuna kanye neyokukhulisa amakhasimende. UMichelle ufika ku-Act-On ngesipiliyoni seminyaka engu-17 + esiza izinkampani ezihola phambili ezimakethe, kufaka phakathi i-Salesforce ne-Oracle, ukuxhuma amakhasimende ngezixazululo zobuchwepheshe ukukhulisa ibhizinisi labo. Muva nje, uMichelle ubenguGM weSigaba seSalesforce sikaData.com ngemuva kokusebenza njenge-VP Yezokumaketha yaleli qembu. Ngaphambi kokuhlala kwakhe eSalesforce, uMichelle wayenguMqondisi Omkhulu e-Oracle kanye neMenenja Yokukhangisa Yomkhiqizo Ophakeme eStellent (eyatholwa yi-Oracle).
U-Ahrefs Uvula Ithuluzi Lokucwaninga Kwamasayithi Elimangalisayo